18/02/2006: Submitted for publication via web
XAQ-U-DIRIRKII AAN XUDUUDDA LAHAYN: Ibraahin Sheekh Saleebaan – 1944kii (qaybtii 6aad)
“Awrka didibso baan idhi,
Nacaskana dud baan idhi,
Daribtii intuu cunay,
Naga raba durduurtee,
Waxba deeqi waayeen,
Is-na dhagax-dixeed iyo,
Deebaaq liq baan idhi,”
Ha dacwiyin Denbiiloow,
Boobe Yuusuf Ducaale – cankaabo@hotmail,com
Intii uu noolaa ayaa mar Ibraahin lagaga duubay cajalad Video ah dalka Imaaraadka, gaar ahaan magaalada Dubay. Barnaamajkaas dhammaadkiisii ayaa Ibraahin la weydiiyay su’aal ahayd, maxaad dadweynaha kula dardaarmaysaa. Ibraahin wuxu ku jawaabay tixdan Miimleyda ah ee soo socota. Bal hadda u fiirsada hummaagyada iyo muuqaallada aan adkayn, haddana uu sida fudud ee farshannimada leh u dhigay. Kaas ayuu ahaa Ibraahin Sheekh Saleebaan. Suugaantiisuna taas ayay ahayd. Wuxu yidhi:
“Midigtaadu yey noqon,
Cagtu yaanay kula marin,
Yaan mililku kaa lumin,
Waxa maqanna faallee,
Makhsinkaad u hoyatiyo,
Ku Masaajid lagu gubo,
Muhmal laguma guuree,
Danni ma-hure haw dilin,
Maan fayow ha ceebayn,
Ha marmarin waxaan jirin,
Ka ilaali meydhaan,
Maro weeye la huwado,
Hodan lagama maarmee,
Marba kii aroosiyo,
Ha maaweelin qayrkaa,
Adiguba marwada dumar,
Meher waad ku geydaa,
Miinxiiska ruux kale,
Waxa kaaga magac-roon,
Ha laguu mashaxaradee,
Adigoo mid guursada,
Gool meesha lagu qalay,
Mud haddaan lagaa siin,
Waxa kaaga magac roon,
Adoo meydhaq deydaya,
Macfal la isu soo baxay,
Haddi anad muftiga noqon,
Mowliidka ka akhriya,
Machad laga aflaxayiyo,
Adigoo maqaam fura,
Geela maalintii raac,
Aan kugu ag maalee,
Ha maggaabin caanaha,
Maaheyska kugu yidhi,
Haba laga masoobee,
Adigoo markaha rida,
Gebegabada sheekadan taariikhiga ah ee aan ku gawl-gawlayo suugaantii iyo noloshii saaxiibkay Tukaale ama Ibraahinba, bal immikana wax aan badnayn idiin ka soo qaado loollan suugaaneed oo dhex maray Yam-Yam iyo Ibraahin, labadoodaba Ilaahay naxariistii Janno ha ka waraabiyo e’.
Ibraahin oo SNM ka tirsanaa iyo Yam-yam oo daafacayay nidaamkii Siyaad Barre waxa dhex maray afar maanso oo ay isugu jawaabayeen. Waa taariikh oo naxli iyo turxaan midna ugama jeedo. Yam-yam oo aanu qudhiisa saaxiib ahayn wuxu nagu soo maray Hargeysa intii aanu dhiman oo uu dhowr bilood nala joogay. Waxa nasiib wanaag ahayd in ay berigaa Hargeysa ku kulmeen oo ay wada joogeen Ibraahin-Gadhle in badanna qayilaad iyo qedoba wadaageen. Yam-yam cidina Hargeysa kuma guhaadin waxna looma raacin bal se si gobannimo iyo qaddarinba leh ayaa loogu soo dhaweeyay looguna sooryeeyay.
Soo hadal-qaadka tixahan ay is-weydaarsadeen Ibraahin iyo Yam-yam waa taariikh bal se xumaan ugama gol lihi.
Yam-yam ayaa tixaha ku horreeyay oo bilowgii tiriyay tix uu ku magacaabay “Ina Gaado-ku-nool” oo uu SNM-ta ula jeeday. Siduu hordhaca maansadaa ku sheegay wuxu ugu dabbaal-degayay Heshiiskii dhex maray Mengistu Xayle Mariam iyo Maxamed Siyaad Barre ee 1988kii. Tuduc maansadaa ku jiray oo Yam-yam lahaa oo Heshiiskaas lagu muunaynayay ayaa odhanayay:
Xareed baa ka galac tidhi,”
Ibraahin maansadaa Ina Gaado-ku-nool ee Yam-yam wuxu kaga jawaabay tix uu ugu wanqalay Gar-naqsi. Aniga oo aan halkan ku soo wada qaadan karayn maansadii oo dhan, bal aan idiin soo qabto tuduc jawaab u ahaa tuducaa Yam-yam oo odhanayay:
“Gariir baa ku miray xalay,
Intaas oo keliya ma ahayne, Yam-yam ayaa haddana soo diray tix kale oo magaceedu ahaa: Dhux-tagoogo. Mar kale iyo marar kale oo badanba Ilaahay labadoodaba ha u naxariistee, Ibraahin ayaa tixdaana kaga jawaabay tix kale oo uu u bixiyay Tuhun-reeb. Waqti kale oo intan ka faro badan marka aan helo ayaan ku yar hakan doonaa afartaa maanso ee jawaabta isu ahaaba, haddii Eebbe idmo.
Sidii ayuu Ibraahin-Gadhle goobihii suugaanta iyo saanaddaba la isku hummaajiyay kaga soo baxay isago oo guulasytay oo goofaaf iyo xarrogaba sanka taagaya. Naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo, wanaaggii uu Soomaali u galayna ha ka abaal-mariyo.